Maitiro ekuvhura iyo .ZIP faira neiyo Notes application | IPhone nhau
Maitiro ekuvhura iyo .ZIP faira ine iyo Notes application
IOS mabhurawuza, kune rumwe rutivi Safari uye kune rimwe divi Google Chrome, kazhinji haigone kubatsira kupfuura zvatinotarisira kune akawanda mabasa. Munguva pfupi yapfuura vamwe vashandisi vawana chimiro chitsva cheiyo iOS Notes application icho chinogona kubatsira zvakanyanya dzimwe nguva. Tiri kutaura nezve mukana wekuvhura mafaera aine compact .ZIP fomati yakananga kubva kuZvinyorwa. Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvitsva zveManotsi muIOS 9.3, kugona kugadzira zvinyorwa nyowani kubva kumamenyu ekudonhedza pasi eSafari neMepu pakati pezvimwe zvinoshandiswa. Isu tinokudzidzisa iwe nekukurumidza uye nyore nzira yekuvhura .ZIP mafaera pane yako iPhone ne iPad pasina dambudziko.
1 Nzira yekuvhura faira reZIP neApple Notes.
2 Inoenderana zvirimo mukati me .ZIP
3 Tsamba uye iCloud Drive zvakare vhura iyo .ZIP fomati
Nzira yekuvhura faira reZIP neApple Notes.
Kutanga uye pamberi pezvese, isu tinofanirwa kutsvaga iyo webhu link kubva kuSafari semuenzaniso. Tinokuyeuchidza kuti izvi zvinongoshanda kuvhura mafaera anoenderana, semuenzaniso mameseji faira muIzwi fomati kana mapikicha, chero mhando yekuisa iyo iyo manyorerwo ekugashira anotambira uye ayo anobva.
Kamwe mune iyi link, isu tinoshandisa iro basa «Vhura mukati ..»Inowanikwa mukona yekumusoro kuruboshwe rweSafari mafaera ayo iwo mushandisi asingavhure ega. Zvimwechetezvo, maNotes anozoonekwa nekumisikidza pakati pekutanga yemenyu yemamiriro, kana ikasaoneka isu tichaenda ku "zvimwe" kumisikidza iyo switch yeNotes.
Chidiki chakatsaurwa Pop Up chichaonekwa, neiyo yakafanana interface seNotes application pachayo uye izvo zvichatibvumidza isu kuti tikurumidze kugadzira chinyorwa kubva kune izvo zvemukati izvo zvatakasarudza muSafari.
Kubva ipapo isu tinongogadzira katsamba nezvakaratidzwa zvemukati. Iye zvino tichaenda kunyorera kunyorera kwe iPhone yedu kuti tiwane Yekutanga Yekucherechedza kuti tasarudza kuwedzera uye izvo chaizvo zvine .ZIP faira, iyo yatinozovhura. Kana katsamba kavepo, tinongobaya pane iro diki bhokisi rinoratidza kuti chinyorwa chine faira reZIP rakabatanidzwa uye rinozovhurika roga.
Kana iri pikicha kana chinyorwa chinyorwa, ichavhura nekukasira, chimwe chinhu chinonyanya kubatsira, semuenzaniso, akawanda ekuyunivhesiti kunyorera, mapurofesa mazhinji anokanda akazara mafaera mu .ZIP fomati nekuda kwezvinodiwa zveimwe web parameter. Nekuda kweizvi, hatichazozviwana tiine zvikwanisiro zvekutambira kana kutumira magwaro mune yakadzvanywa .ZIP fomati pane edu iOS zvishandiso Pasina mubvunzo izvi zvine akawanda anoshanda mafomu, kunyanya kune avo vashandisi kune avo iyo iPad iri imwe hofisi otomatiki chishandiso, zvese kumudzidzi uye padanho rebasa, sezvo iyo .ZIP fomati yakapararira zvakanyanya munzvimbo dzese. Muchokwadi, Windows neMac OS zvinotibvumidza kuti tivhure otomatiki uye kumanikidza mafaera mu .ZIP fomati pasina kuomerwa kukuru, saka chiero chatinowana chero kwese kwese.
Inoenderana zvirimo mukati me .ZIP
.jpg, .tiff, .gif (Mufananidzo)
.doc uye .docx (Microsoft Word)
.htm uye .html (Webhu)
.ppt uye .pptx (Microsoft PowerPoint)
.rtf (Rich Rugwaro)
.xls uye .xlsx (Microsoft Excel)
Tsamba uye iCloud Drive zvakare vhura iyo .ZIP fomati
Isu tasarudza manyorerwo ekushandisa nekuti zvinoita sekunge isu anonyanya kushanda, asi handiyo yega, iCloud Drive neMeyili paIOS zvakare zvine mukana wekuvhura mafaira akaomeswa mune ino fomati fomati. Izvo zvinotibvumidza isu kutumira nyore uye kugamuchira aya marudzi emafomati kubva kune ese maapplication, yanga iri nhanho kumberi maererano nekusiyana-siyana kweIOS, hurongwa husina mukurumbira chaizvo pachikonzero ichocho. Kana iwe uine chero mibvunzo, isu tiripo kuzokubatsira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuvhura iyo .ZIP faira ine iyo Notes application
Apple Inopindura FBI Chikumbiro Chekuwana Dare rematsotsi muVhura Tsamba
Leo´s Fortune ikozvino inodhura chete 0,99 Mhanya benzi!